ဆွာရက်စ် ရောက်လာပြီးမှ စံချိန်တွေတစ်ပွေတစ်ပိုက်ကြီးယူနေတဲ့ အေတီကို - Shwe Soccer
ဆွာရက်စ် ရောက်လာပြီးမှ စံချိန်တွေတစ်ပွေတစ်ပိုက်ကြီးယူနေတဲ့ အေတီကို
အသလက်တီကို အသင်းကတော့ ဒီမနက်ပိုင်းက ကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ်မှာ ဆီဗီလာ အသင်းကို (၂)ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရပြီး အမှတ်ပေးဇယား ကို (၄)မှတ်ဖြတ်ပြီး ဦးဆောင်လိုက်ပါတယ်။အသလက်တီကို အသင်းဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ပွဲကျန်(၂)ပွဲကစားဖို့ ကျန်နေတာတောင် အခုလို ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရီးရယ်လ်၊ ဘာစီလိုနာ တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Soccer Football – La Liga Santander – Atletico Madrid v Sevilla – Wanda Metropolitano, Madrid, Spain – January 12, 2021 Atletico Madrid’s Angel Correa celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Sergio Perez
အသလက်တီကို အသင်းဟာ ဆီဗီလာ အသင်းကို အနိုင်ရပြီးနောက် အခုရာသီ လာလီဂါ (၁၆)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ရမှတ်(၄၁)မှတ်ထိ ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရာသီတစ်ခုရဲ့ပွဲစဉ်(၁၆)ပွဲကစားအပြီးမှာ ကလပ်အသင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးရမှတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ အသလက်တီကို အသင်းအတွက် လာလီဂါဖလားရခဲ့တဲ့ (၂၀၁၃-၁၄) ရာသီနောက်ပိုင်း ရမှတ်အမြင့်ဆုံးအဖြစ်လည်း စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
MADRID, SPAIN – JANUARY 12: Angel Correa of Atletico de Madrid celebrates after scoring their team’s first goal during the La Liga Santander match between Atletico de Madrid and Sevilla FC at Estadio Wanda Metropolitano on January 12, 2021 in Madrid, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
ဒါ့အပြင် အသလက်တီကို အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းနဲ့ ဂိုးသမားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး ကစားကွက်ကနေ ပေးခဲ့ရတဲ့ ဂိုး(၂)ဂိုးပဲရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသလက်တီကို အသင်းဟာ အခုရာသီစထဲက အကောင်းဆုံးပုံစံမှာ ရှိနေတာဖြစ်ပြီး တိုက်စစ်မှုး ဆွာရက်စ် ရောက်ရှိလာခြင်းကလည်း အသင်းအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပါ။
ဆွာရက်စ် ဟာ ဆီဗီလာ အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အသင်းဖော်တွေဂိုးရအောင် အကောင်းဆုံးကစားပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွာရက်စ် ဟာ ဒီရာသီမှာ အသလက်တီကို အသင်းအတွက် လာလီဂါ(၉)ဂိုး သွင်းယူပြီး ခြေစွမ်းပြနေခဲ့တာပါ။အသလက်တီကို အသင်းဟာ အခုလာမယ့်အပတ်မှာတော့ စပိန်လာလီဂါ ပွဲစဉ်အဖြစ် အီဘာ အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသလက္တီကို အသင္းကေတာ့ ဒီမနက္ပိုင္းက ကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပြဲစဥ္မွာ ဆီဗီလာ အသင္းကို (၂)ဂိုး-ဂိုးမရွိနဲ႔ အနိုင္ရၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ကို (၄)မွတ္ျဖတ္ၿပီး ဦးေဆာင္လိုက္ပါတယ္။အသလက္တီကို အသင္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ပြဲက်န္(၂)ပြဲကစားဖို႔ က်န္ေနတာေတာင္ အခုလို ထိပ္ဆုံးေနရာမွာ ရီးရယ္လ္၊ ဘာစီလိုနာ တို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
အသလက္တီကို အသင္းဟာ ဆီဗီလာ အသင္းကို အနိုင္ရၿပီးေနာက္ အခုရာသီ လာလီဂါ (၁၆)ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္မွာ ရမွတ္(၄၁)မွတ္ထိ ရယူနိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရာသီတစ္ခုရဲ့ပြဲစဥ္(၁၆)ပြဲကစားအၿပီးမွာ ကလပ္အသင္းရဲ့အျမင့္ဆုံးရမွတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာ အသလက္တီကို အသင္းအတြက္ လာလီဂါဖလားရခဲ့တဲ့ (၂၀၁၃-၁၄) ရာသီေနာက္ပိုင္း ရမွတ္အျမင့္ဆုံးအျဖစ္လည္း စံခ်ိန္တင္နိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အသလက္တီကို အသင္းရဲ့ခံစစ္ပိုင္းနဲ႔ ဂိုးသမားရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြဟာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး ကစားကြက္ကေန ေပးခဲ့ရတဲ့ ဂိုး(၂)ဂိုးပဲရွိခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။အသလက္တီကို အသင္းဟာ အခုရာသီစထဲက အေကာင္းဆုံးပုံစံမွာ ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး တိုက္စစ္မႈး ဆြာရက္စ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းကလည္း အသင္းအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာပါ။
ဆြာရက္စ္ ဟာ ဆီဗီလာ အသင္းကို အနိုင္ရခဲ့တဲ့ ပြဲမွာ ဂိုးမသြင္းနိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အသင္းေဖာ္ေတြဂိုးရေအာင္ အေကာင္းဆုံးကစားေပးနိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဆြာရက္စ္ ဟာ ဒီရာသီမွာ အသလက္တီကို အသင္းအတြက္ လာလီဂါ(၉)ဂိုး သြင္းယူၿပီး ေျခစြမ္းျပေနခဲ့တာပါ။အသလက္တီကို အသင္းဟာ အခုလာမယ့္အပတ္မွာေတာ့ စပိန္လာလီဂါ ပြဲစဥ္အျဖစ္ အီဘာ အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Previous Article ဒုတိယနေရာက လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲအတွက် အသင့်ပဲလိုပြောပြီး စိန်ခေါ်စကားဆိုခဲ့တဲ့ ပေါ့ဘာ
Next Article ဘတ်ပေးကို ခေါ်ဖို့ ကစားသမား(၆)ဦးအထိရောင်းပြီး ငွေရှာမယ့် ရီးရယ်လ်